रुचि हुनु हुनेछ जसले यात्री लागि खेल, दौरा इङ्गल्याण्ड लागि प्रिमियर लिग मिलान विशेष हुन सक्छ अनुभव. केही टिमलाई उठ्नेछ र गिर गर्दा प्रत्येक सिजन लीग देखि, यसलाई अर्थ कहिल्यै ठीक नै दुई पटक एक पंक्ति मा छ, यो सबै इङ्गल्याण्ड र वेल्स बाहिर फैलाउन कि साँचो सधैं छ. यसले वास्तवमा प्रिमियर लिगलाई एक किसिमको प्राकृतिक यात्रा बनाउँदछ जो देशको अन्वेषण गर्न चाहन सक्दछन्. यो सबैभन्दा प्रमुख शहर समावेश, केही सबैभन्दा भावुक प्रदर्शित को स्थानिय संस्कृति, र केहि साँच्चिकै अविश्वसनीय स्टेडियमहरू. प्लस, एक शहर देखि अर्को गर्न सवारी तपाईं प्रसिद्ध ब्रिटिश देहात को राम्रो झलक दिन सक्छ!
एक पटक ब्रिङ्टनको, तपाईंले केही साँच्चै विशेष क्षेत्रमा वरिपरि हिँड्ने गरेर आफ्नो खुट्टा पसार्नु गर्न सक्छन्. शहरमा घाट प्रसिद्ध छ (र यसको उचित-जस्तो वातावरणमा अत्यधिक मनोरंजक धन्यवाद), र केही पुराना पसलहरूमा र अन्वेषण लायक रेस्टुरेन्ट जिल्लामा छन्. फुटबल-बुद्धिमानी, तपाईं Falmer स्टेडियम गर्न लाग्यौं गरिने, जो लिग मा नयाँ व्यक्तिहरूलाई मध्ये एक छ. ब्राइटन & Hove अल्बियन अंग्रेजी फुटबल को शीर्ष उडान मा एक Powerhouse छैन, तर यसको प्रशंसक भावुक हुन सक्छ र एक म्याच एक मा एक दिउँसो वा साँझ खर्च गर्न को लागी एक महान तरीका हो तातो समुद्र तट शरद ऋतु मा शहर.
ब्राइटन पछि, तपाईं पश्चिम तिर अप circling सुरु गर्न आवश्यक छ, र त्यहाँ केहि विकल्पहरू छन्. तपाईं सकेजति दक्षिण पश्चिम मा बौर्नेमौथ वा साउदाम्पटोन गर्न यात्रा, उदाहरण को रुपमा, दुवै शहर रूपमा छ प्रिमियर लिग टोली. तर किनभने फुटबल अप उत्तर राम्रो छ (र त सहर हो, यकीनन), यसलाई साथै उत्तर सार्ने सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. त्यसैले म कार्डिफ शीर्षक सिफारिस गर्न चाहन्छौँ, वेल्स. कार्डिफ सेन्ट्रल ब्राइटन स्टेसनबाट रेल चलाउन सक्नुहुन्छ बारेमा चार देखि चार-र-एक-आधा घण्टा, एक तीन परिवर्तनहरू ठाउँबाट संग. यो रेल चालु यो मार्गमा थप वा कम सबै दिन.
यो बाट बिन्दु, त्यहाँ केही विकल्प छन्. आफ्नो समय सीमित छ भने, यसलाई लन्डन फिर्ता शीर्षक अघि म्यान्चेस्टर गर्न धेरै छोटो यात्रा लिन सर्वश्रेष्ठ हुन सक्छ. त्यहाँ समय भने, तथापि, म म्यान्चेस्टर भूत र उत्तरी जाँदै सिफारिस गर्न चाहन्छौँ, लिभरपूल लाइम स्ट्रिटबाट न्यू क्यासलको लागि लगभग तीन घण्टा सवारी के हुनु पर्छ. तपाईं एक सीधा प्राप्त गर्न सक्छन् सवारी, र, जबकि यो नक्सामा यो सारा रूपरेखा को सबैभन्दा लामो खण्ड जस्तो देखिन्छ, यो खराब यात्रा गर्न साँच्चै हो.
न्यूक्यासल मा छिटो मिलान पछि, तपाईं म्यान्चेस्टर फिर्ता रेल समातेर सक्नुहुन्छ, संभवतः मा धेरै नै दिन निर्धारण बाहिर काम गर्दछ भने. न्यूक्यासल सेन्ट्रल स्टेशन गर्न म्यान्चेस्टर भिक्टोरिया हुनुपर्छ एक दुई र एक-आधा घण्टा एक भन्दा बढी परिवर्तन बिना यात्रा.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#फुटबल #फुटबल रेल यात्रा traveltips
सबै कुरा फिल्म को बारे मा भावुक, फुटबल र फिल्महरु हेर्दै, अरूलाई यस संसारको वरिपरि आफ्नो बाटो बनाउन मद्दत. जब म खाली समय छ म पनि लेख्न र मेरो विचार र कथाहरु लाई साझा गर्न को लागी माया गर्दछु. - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्